को'रोनाबारे सुसुचित गर्ने प्रवक्ता गौतमको यस्तो ल’ज्जित दृ’श्यले बनायो धेरैलाई चकित ! [भिडियो सहित] -
को’रोनाबारे सुसुचित गर्ने प्रवक्ता गौतमको यस्तो ल’ज्जित दृ’श्यले बनायो धेरैलाई चकित ! [भिडियो सहित]
काठमाडौ। को’रोना संक्र’मणबाट बँच्न नाक, मुख र आँखा नांगो हातले नछुन, नचलाउन दिनदिनै आग्रह गर्नेमध्येका सबैभन्दा प्रमुख पात्र हुन् स्वास्थ्य तथा तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम । तर मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले औंलाले नाक कोट्याएको दृश्य अहिले भाइरल बनेको छ ।
सधै झैं मंगलबार साँढे चार बजे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलको नियमित पत्रकार सम्मेलन सुरु भयो । तर मंगलवारको नियमित पत्रकार सम्मेलमा अन्य सम्मेलमा भन्दा केहि अनौठो र अभद्र दृष्य क्यामेरामा कैद भयो ।पत्रकार सम्मेलमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नाक को’ट्याएको दृ’श्यले धेरैलाई ल’ज्जित बनायो।
को’रोना भा’इरसको नियमित पत्रकार सम्मेल गर्दै आएका गौतमको यस्तो काम नगर्न बारम्बार भन्ने गर्छन् । तर उनले मंगलबार देखाएको क्रियाकलापले आम नागरिकलाई लज्जित त बनायो नै स्वयं गौतमप्रति नैतिक प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
को’रोना स’क्रमणबाट बच्न नाक मुख र आँखा नचलाउन आफै आग्रह गर्ने अनि क्यामेरामा कैद नै हुने गरी आफलेै यस्तो अ’भद्र व्यवहार कतिको पाच्य होला ? त्यसो त जागेश्वर पेशाले आफै चिकित्सक पनि हुन् । साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका डक्टर गौतमले गरेको यस्तो क्रियाकलाबाट आम नागरिकमा कस्तो सन्देश जाला ?